लिम्वूवान - विविध सामग्री: लिम्वुवान लिम्वुवानीहरुको साझा राज्य हो
लिम्वुवान लिम्वुको मात्र होईन
लिम्वुवानको आन्दोलन आफ्नै गतिमा गईरहेको अवस्थामा लिम्वुवान लिम्वु जातिको मात्र हो । अन्य जातिको होईन । यो लिम्वुवान नामको राज्य भयो भने अलिम्वुलाई लिम्वुहरुले खेद्छन् भन्ने हल्ला पनि फिजाईएको पाईन्छ । वि.सं.०७ सालमा पनि लिम्वुहरुले गैह्र लिम्वुलाई खेदेका थिए । त्यस्तै जातिय नामको राज्य भयो भने अन्य जातिकोलाई हिनतावोध र लिम्वुहरुलाई आडम्वरता आउछ भन्ने सोचाई पनि ल्याईने गरिन्छ । वास्तवमा कतिपय सवालमा कतिपयलाई त्यस्तो मन नहोला भन्न सकिन्न । तर त्यस्तै भनेचाही हुदैन । किनकी लिम्वुवान आज सिर्जित भएको नाम होईन । यो इतिहासदेखिको नाम हो । नेपालमा किरात शासन हुंदा पनि लिम्वुवान अस्तित्वमा भएको पाईन्छ । त्यसवेला याक्थुङ लाजे भनिन्थ्यो । त्यस्तै इतिहास अनुसार छैटौं शताव्दीमा लिम्वुवान नामको स्थापना भएको हो । तर वि ग्रहवादी तथा सतहवादीहरुले अहिले लिम्वुहरुले सृजित गरेको नाम भनेर वखेडा झिक्दछन् । यस्ता कुराहरुले खतराको स्थिती निम्त्याउदछन् । यसमा सवैले सोच्नु पर्दछ । एउटा कुरा नेपाल देश पहिला भएको कि माधव नेपाल पहिला ? के माधव नेपाल स्वीकार्नेले लिम्वुवान किन स्वीकार्न सक्दैन ? कुरा वुझिनसक्नु छ । माधव नेपालको नेपाल देश जातिय भयो, थरीय भयो , अव फेर्नु पर्छ किन भनिदैन ? के यो लिम्वुवानलाई मात्र लागु हुने हो ? सवैले सोचौ ।
अर्को कुरा लिम्वुहरुले ०७ सालमा गैह्र लिम्वुहरुलाई खेदाएका थिएनन् । यो अफवाह मात्र हो । त्यसवेला राणा पक्षधर शोषकहरुचाही खेदिएका थिए । यदि खेदाएको भए अहिले पनि लिम्वुवानमा गैह्र लिम्वुहरुको जनसंख्या कसरी लिम्वुहरुभन्दा वढी हुन्थ्यो ? वृहत लिम्वुहरुको जनसंख्या भएको ताप्लेजुङ र पानथरमा पनि गैह्र लिम्वुहरुमा सवै को के कुरा गर्ने वाहुनको जनसंख्या पनि उल्लेख्य रुपमा रहेको छ । यही उदाहरणनै यसो भन्नेलाई पर्याप्त हुनेछ ।
कोचिला लिम्वुवानमा हुन सक्दैन
इतिहासमा कही पनि कोचिलाको उल्लेख देखिदैन । त्यसैले माओवादीले किन कोचिला ल्याएर लिम्वु तथा राजवंशी दुर्इजातिलाई लडाउन खोज्दैछ, विचारणीय कुरा छ । पहिले कोच विहार भन्ने आसाममा पर्दथ्यो । त्यसैको पुनरावृति गर्न खोजिएको हो कि के हो ? यसको लागि माओवादी जवाफदेही हुनुपर्दछ । हिजो कोचिला भन्ने क्षेत्रमा विराट राज्य थियोरे । मोरङ राज्य थियो । विजयपुर राज्य थियो । तर कोचिला थिएन । वरु मोरङ राज्यहरुको वकावत सान्दर्भिक हुंदछ । तर यो राज्यहरु लिम्वुवान अन्तर्गत थिए र अहिले पनि हुनुपर्दछ । लिम्वुवान तत्कालिन समयमा संघीय रुपमा सञ्चालित थियो । लिम्वुवानमा १० स्वायत्त राज्यहरु थिए । त्यसमध्येको एउटा मोरङ थियो । यसलाई कालन्तरमा विजयपुर पनि भनियो । मेचे, कोचे, धिमालहरु त्यसक्षेत्रको जनाताहरु थिए भनेर इतिहासकार राज वआदुर पन्धाक वताउनु हुन्छ । वि.सं. १८३१ तिरका अन्तिम विजयपुरका राजा वुद्धिकर्ण खेवा हाङ थिए भनेर खेवा लिम्वु वंशावलीले वताउछ । त्यो अवस्थासम्म पनि लिम्वुवान संघीय अवधारणामा सञ्चालित थियो । पृथ्वी नारायणले सम्झौता गर्दा लिम्वुहरुसंग सम्झौता गरेका थिए । कोचिलासंग या कोचे, मेचे र राजवंशीहरुसंग गरेका थिएनन् । त्यस्तै लिम्वुहरुले आज भनिने कोचिलाको मोरङ, सुनसरी र झापामा पनि सुवाङगी तथा जिमीदारी प्रथा चलाएर ल्याएका थिए । त्यसैले यो क्षेत्र कदापी कोचिलाको हुन सक्दैन । लिम्वुवाननै हुनुपर्दछ ।
कही साथीहरु कोचिला लिम्वुवानमा हाल्दा गैह्र लिम्वुहरुको जनसंख्या धेरै हुन्छ भन्छन । त्यसैले लिम्वुवानमा लिम्वुहरु अल्पमतमा पर्दछन् । तर मानौं कोचिला राज्यमा कोचिला भनिनेहरु अति अल्पमतमा हुने कुरा विर्सन्छन् । त्यो क्षेत्रमा वाहुनको जनसंख्या वढी हुन्छ । जनसंख्या हेर्ने हो भने कही कुनै पनि राज्य वन्दैन । त्यसैले राज्य निर्माण गर्दा ऐतिहासिकताको आधारमा कुन जाति समुदाय तथा नामवाट पहिले सञ्चालित थियो उसैको आधारमा राज्य वन्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यही आधार तथा लिम्वुवानको आफ्नै विषेश स्थिती भएकोले लिम्वुवान राज्यको वकालत गरिएको हो । यसमा संविधान सभाले ध्यान पुरयाउनै पर्छ ।
लिम्वुवान राज्य हुंदा लिम्वुजाति तथा त्यहाको आदिवासीहरुलाई केही विषेश अधिकार प्रत्याभूत भएतापनि अन्य जातिहरुको स्थिती पनि स्वभाविकनै हुन्छ । हामी सवै नयां सम्रचनामा गैरहेकोले कस्तो हुनेहोला भन्ने दुविधामा छौं । तर त्यस्तो फरकता केही पनि हुदैन । त्यसैले लिम्वुवानको सवालमा हामीले अफवाह नफैल्याई लिम्वुवान राज्यको सवालमा मत जाहेर गरौं । यसले देशलाई खण्डनवाट पनि जोगाउछ । गृहयुद्धवाट जोगाउछ । ठूला भनाउदा पार्टीहरुले गृहयुद्धमा देशलाई होम्न खोज्दैछन् । उनीहरुको आईडोलोजी समय सापेक्ष छैन । यो कुरा जनताले वुझनु पर्दछ । यसमा सानो उदाहरण दिऔं-अहिले लिम्वुवानको आन्दोलनलेनै लिम्वुवानलाई तहसनहस वनाईरहेको अवस्थामा लिम्वुवान राज्य नवनाईएको खण्डमा हालत कस्तो होला । त्यसैले राज्य पूनसंरचनाको क्रममा सम्वन्धित क्षेत्रले माग गरेकै आधारमा निर्माण गरिनु अहिलेको लागि सापेक्ष हुनेछ । हामी सवैले यस वारेमा सोचेर कार्य गरौं । सेवारो ।
Posted by limbu at 6:49 PM